I-Casa Martini enechibi langasese - I-Airbnb
I-Casa Martini enechibi langasese
Pula, Loborika, Istria County, i-Croatia
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Cor
U-Cor Ungumbungazi ovelele
Indawo ekahle yokuphuma ezixukwini zezivakashi, kodwa isaseduze nezindawo ezikhangayo zemvelo nezomlando zase-Istria.
Le ndlu itholakala edolobhaneni elincane eliqhele ngemizuzu eyi-10 ukusuka edolobheni lasePula (ngemoto), imizuzu emi-5 ukusuka esikhumulweni sezindiza (sihlinzeka ngezokuthutha), kanye nemizuzu eyi-15 ukusuka emabhishi aphelele anolwandle oluluhlaza okwesibhakabhaka. Indlu izungezwe amasimu, izivini, izihlahla zeminqumo kanye nezindlu zabantu basemakhaya.
Indlu, eyalungiswa ngokunakekela nangothando ngo-2014, inamakamelo okulala amabili (kunombhede owodwa owengeziwe kwelinye lawo) enamagumbi okugezela engeziwe esitezi esiphezulu, kanye negumbi lokuhlala elinesikhala elinendawo yomlilo kanye nombhede osofa ababili, omnandi futhi osebenzayo. ikhishi kanye negumbi lokugezela elilodwa elengeziwe phansi. Indlu ine-air conditioner ngokugcwele, futhi igumbi ngalinye line-cable TV.
Itshe eliyigugu elifihliwe lale ndlu liyigceke elikhulu elingemuva elinamachibi okubhukuda angaphandle (32 m2), indawo yokuphumula enezihlalo zamadekhi kanye ne-grill yendabuko eyakhiwe ngamatshe. Ichibi elifakwe usawoti elinokujula okuthathu okuhlukile, isistimu ehlanzekile ezenzakalelayo nayo ithakathwa ngamatshe e-quartz phansi ukuze kube nomphumela wolwandle.
Sinikeza ithuba lokusebenzisa indawo yokuzivocavoca kanye nethaveni ngokuvumelana nomnikazi.
Indawo yasemaphandleni lapho indawo itholakala khona ihlinzeka ngokuhlala okunokuthula nezindawo ezinhle ezilungele ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili. Kukhona ithuba lokugibela ihhashi ezindaweni ezingomakhelwane kanye nokuhlinzeka ngokunye kwegrosa njengamaqanda, iwayini, izithelo zonyaka kanye nemifino.
Sihlala kwamakhelwane, futhi kuzoba intokozo ngathi ukukunikeza lonke ulwazi nesiphakamiso mayelana nendawo oyodinga ukuyijabulela e-Istria.
UCor Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Pula, Loborika namaphethelo